Malunga nathi -I-Dongguan Vanhe Modular House limited
Dongguan Vanhe seemodyuli House Limited
eneemfuno ezizodwa kuyilo, ukuThengisa, ukuThengisa kunye noKwakha izindlu esele zenziwe. Yasekwa ngo-2012, DONGGUAN CITY, iyaqhubeka ukwenza impumelelo kwaye ngoku uye waba ngumboneleli omkhulu wokwakha waseTshayina kunye nenkonzo enobuchwepheshe obuphambili kwindlu esele ikhethwe.
Ngeqela elisebenza nzima kunye nomoya osebenzayo ohambelanayo, iimveliso zethu zigqibelele ngakumbi kwaye zahlukile, kungekuphela nje ngenkangeleko entle, kodwa kukwasebenza kwiindawo ezininzi. Sinezinto zokumisa kwindawo enye kuyilo, imveliso, ulwakhiwo kwintengiso.
Kuze kube ngoku, i-VANHE ibonelele ngempumelelo amawaka eeprojekti zezindlu ezikhethiweyo kumazwe angaphezu kwe-100, kubandakanywa ukucwangciswa kwekampu, ukuyila izakhiwo, ukuveliswa kwezindlu, ukuthuthwa, ukufakwa kwendawo, ukuhlobisa kwangaphakathi, izakhiwo zeenkampu, njl. kubathengi ngomgangatho wayo ophezulu wemveliso, itekhnoloji yokwakha ebalaseleyo kunye nenkonzo enomdla emva kokuthengisa. Ngenxa yamava amashumi eminyaka yamava atyebileyo kulwakhiwo lwendlu olwalukhethwe kwangaphambili kunye nokuqokelelwa kwemigaqo-nkqubo yesizwe eyahlukeneyo, imithetho, amasiko, inkcubeko kunye nemozulu echaphazela iprojekthi eqhuba kakuhle, i-VANHE ibikhokela ukwakhiwa kwendlu yaseTshayina yaphesheya kwaye ibe ngumboneleli okhethwayo amaShishini oKwakha amaShayina awaziwayo amakhulu.
Iifoto ezisekunene zezinye zeeprojekthi esiye sasebenzisana nazo kwihlabathi liphela kutsha nje. Ukuba unomdla, unokucofa ukujonga
Ngenxa yoko kufezekisiweyo, i-VANHE ayonelisekanga. Ihlala igcina inqanaba eliphezulu lehlombe ekufundeni, ifakela ukubaluleka okukhulu kwisicwangciso sophuhliso oluzinzileyo kunye notshintshiselwano kwaye ifunda ngokukuko kunye neontanga ezinkulu ezaziwa kwilizwe liphela. Ukusukela ngo-2012 ukuza kuthi ga ngoku, ukusuka ekuzalweni kwayo okungaqhelekanga ukuya kubuqaqawuli bayo namhlanje, ukusuka ekuqalekeni okumangalisayo ukuya kuphuhliso lwentuthuko, abantu beVANHE benza indlela engaqhelekanga enezinto ezintsha kunye nophuhliso. Kodwa ukuthembeka kuya kuhlala kukuzibophelela ngokunyanisekileyo kubathengi. Ngaphezu koko, ngumphefumlo weshishini.
Iminyaka esibhozo yemvisiswano yakha ubukhosi kunye nenkulungwane yemfezeko iphosa ukugqwesa. U-VANHE, umphathi wenqwelomoya wase-China ohlanganisiweyo kushishino lwezindlu, uya kuqhubeka ekhokela uphuhliso lweshishini kwaye abhale isahluko esitsha seshishini.